E-News Nepali || Fast and Accuracy » यी ८ वर्षीय बालक पाँच दिनदेखि वेपत्ता खोजि गरिदिन परिवारको आग्रह !
यी ८ वर्षीय बालक पाँच दिनदेखि वेपत्ता खोजि गरिदिन परिवारको आग्रह !
यी ८ वर्षीय बालक पाँच दिनदेखि वेपत्ता खोजि गरिदिन परिवारको आग्रह ! डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी ९ ढाँट गाउँ निवासी पूर्णबहादुर पालका छोरा ८ वर्षीय बालक प्रविन पाल ५ दिन*देखि बेपत्ता भएका छन् । पाल ५ दिन*देखि बेपत्ता रहेको बालकका आफन्त पुस्कर बहादुर पालले बताएका छन् । यही मंसिर १६ गते बिहान घर*बाट विद्यालय जान्छु भनि निस्केका बालक उतैबाट बेपत्ता भएको उनको भनाइ छ ।
उनी भागेश्वर मावि टाँटरमा कक्षा ३ मा पढ्दै थिए । १६ गते विद्यालय गएका बालक घर नआए*पछि विद्यालयमा बुझ्दा विद्यालयले पनि उपस्थित नभएको जानकारी गराएको थियो। बालक बेपत्ता भएपछि बालकका आफन्तले खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरामा निवेदन दर्ता गरको छ ।
१८ गते बालक हराएको उजुरी प्रहरीमा आएको डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपाने बताएका छन् । बालकको खोजी कार्यमा प्रहरी लागि*परेको प्रहरी नायव उपरीक्षक न्यौपानेले बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : काठमाडौं, १८ मंसिर । नेपाली भूमी समेत समेटेर भारतले हालै जारी गरेको नक्साका बारेमा भारतसंग औपचारीक कुराकानी गर्न जान लागेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण तत्कालका लागि रोकिएको छ । उनी नेपालका तर्फवाट विशेष दुत बनेर भारत जान लागेका थिए । भारत गएर उनले प्रत्यक्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग कुराकानी गर्ने कार्यक्रम थियो । तर भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटका लागि समय नदिएपछि तत्कालका लागि उनको भारत भ्रमण रोकिएको हो
प्रकाशित मिति २० पुष २०७६, आईतवार ०१:४६